Ciidamadda Xoogga oo Maleeshiyaadka Al-shabaab ka saaray Degaanno ka tiran Jubada Hoose | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamadda Xoogga oo Maleeshiyaadka Al-shabaab ka saaray Degaanno ka tiran Jubada Hoose
Ciidamadda Xoogga oo Maleeshiyaadka Al-shabaab ka saaray Degaanno ka tiran Jubada Hoose
Kadib howlgal qorsheeysan oo ay ciidamadda kumaandooska xds danab kasameeyeen degaano katirsan gobolka jubada hoose ayay kasaareen maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab kuwaasi oo dhibaato xoogan ku hayay shacabka ku dhaqan degaanadaasi.
Howlgalka oo ay ku fulinayeen ururka 5-aad guutada 16-aad kumaandooska xoogga dalka danab ayay kula wareegeen tuulooyinka Janaay cabdale, Helishiid, Mayoonde, Garas –cebe iyo kuwalo oo dhamaantood hoosyimaado magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose.
Taliyaha ururka 5-aad guutada 16-aad kumaandooska xds danab Gaashaanle Xasan Aadan Ciraaqe oo Idaacadda Ciidamadda Qalabka Sida lahadlay ayaa sheegay in maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay isaga carareen degaanada howlgalka ay ku gaareen iyo degaano kale oo haatan ay kusii socdaan.
Taliyaha ayaa xusay inay kordhiyeen howgalada qorsheeysan ee ay ku bartilmaamedsanayaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argagixisada kuwaasi oo ay doonayaan inay guud ahaan degaanada jubooyinka kasaaraan.
G/le Ciraaqi ayaa ugu dambeeyntilmaamay in haatan tuulooyinka ay gaareen ay kawadaan howlo ay ku caawinayaan shacabka kudhaqan kuwaa oo dhibaatooyin ay ku hayeen argagixisada al-shabaab.
Previous articleKorar ku yimid dadka uu ku dhacay Corona Virus ee Mareykanka iyo Brazil 4-tii maalmood ee la so dhaafay.
Next articleMadaxweyne Farmaajo Oo Shacabka, XFS Ugu Hambalyeeyey Diblumaasiyadda Hoggaaminta QM.
Dowladda Soomaaliya oo saakay si rasmi ah dib ugu furtay Duulimaadyada gudaha Dalka.
Dhismaha wadada iska xirta Baladwayne iyo jentokundisho oo dib loo bilowday
Taliska Booliska Soomaaliya oo faafaahin ka bixiyay Qaraxii ka dhacay laanta Canshuuraha.
Dowladda Soomaaliya oo saakay si rasmi ah dib ugu furtay Duulimaadyada...
Taliska Booliska Soomaaliya oo faafaahin ka bixiyay Qaraxii ka dhacay laanta...